Gcina Inanazi yakho itight ngendlela ephephile - Ladies House
Gcina Inanazi yakho itight ngendlela ephephile
May 12, 2020 May 13, 2020 Staff Writer
Akunandaba ukuthi zithini izinganekwane kanye nezinsolo zokuya enkozweni yasekamelweni, inanazi yakho angeke ivuleke kakhulu ngexa yokuth uya njalo enkozweni ne babazi lakho noma nabantu abaningi.
Amagama athi “ivulekile or iyabanda or imanzi kakhulu” “ayisitatimende esidelelayo,” Futh kukhombisa ukungaqondi ukuthi empeleni inanazi isisebenza kanjani. “Engingathanda ukuthi abanye baqonde ukuthi inanazi yakhiwa yimisipha eminingi echaza indawo yaphansi,” “Le misipha ingaqina futhi iphumule ngokuya ngesimo .Uma usukulungele ukuya enkozweni imsipha le iyaRelex to accommodate ibabazi bese ibuyela back to its original state umani qeda.Futhi lokho akuguquki, noma ngabe wenza inkonzo kangaki noma nabalingani abangaki.
Nazi izindlela that you can use to tighten inanazi yakho
Ukuzivocavoca kwe-Kegel, ngesinye isikhathi ngezinsimbi ze-kegel, kungasiza ekuqiniseni phansi kwe-pelvic. Ngenkathi noma ngubani onesitho sangasese angabona izinzuzo zezempilo ngokwenza ama-kegels, anconyelwa ikakhulukazi ngesikhathi sokukhulelwa nangemva kokubeletha ukusiza ukuqinisa phansi kwe-pelvic floor.
kubalulekile ukuthi ube nokudla okunempilo futhi unamathele kuko. Kuyavela, uhlobo olufanele lokudla lungagcina i-nanaz yakho iphilile, ijabule futhi ingenasifo
Finally do not put anything kwi i-nanaz yakho that’s not suppose to enter inanazi , inanazi has a smell vele so stop wanting it to smell like roses, and inanazi yakho it’s elastic by nature so stoping using unnecessary things ( eg tightening soap) to make it tighter uyazilimaza and lokho kungabangela izifo zangaphansi . If ethi uloose uyena onenkinga if inanazi ikwazi ukubuyela after child birth iyin ke itoto yakhe.
← Jessica Nkosi Speaks Out on why she left isibaya to join “The Queen
Thando Thabethe Laughs Off Claims That She Faked Her Matric Certificate →
Watch: Khanyi Mbau narrates first encounters with sugardaddy Mandla Mthembu: After he kissed me, the following morning I returned to his house
June 16, 2020 June 16, 2020 Staff Writer